Orgba alụkwaghịm na nne na nna | Law & More B.V. | Eindhoven
blog » Divgba alụkwaghịm na nne na nna. Gịnị ka ọ dị mkpa ka ị mara?
Divgba alụkwaghịm na nne na nna. Gịnị ka ọ dị mkpa ka ị mara?
You lụọla di na nwunye ka ị nwere mmekọ edenye aha gị? Na nke ahụ, iwu anyị sitere na usoro nlekọta na ịzụlite ụmụ site na nne na nna, dị ka edemede 1: 247 BW. Ihe dị ka ụmụaka 60,000 na-eche ịgba alụkwaghịm site n'aka ndị mụrụ ha kwa afọ. Agbanyeghị, ọbụlasịrị ịgba alụkwaghịm ahụ, ụmụaka nwere ikike nlekọta na nzụlite nne na nna na nne na nna nwere ikike ijikọ aka, na-egosipụta ikike a dika Iwu nke 1: 251 nke Usoro Obodo Obodo. N'adịghị ka ndị gara aga, ndị nne na nna na-elekọta ikike nne na nna jikọrọ ọnụ.
Enwere ike ịkọwa njide nne na nna dị ka ikike na ọrụ niile ndị nne na nna nwere banyere otú e si zụlite na ilekọta ụmụ ha pere mpe ma jikọta ya na akụkụ ndị a: onye dị obere, nchịkwa nke akụ ya na nnọchite nke ọrụ obodo na na extrajudicially. Karịsịa, ọ na-emetụta ibu ọrụ nke ndị nne na nna maka mmepe nke omume, ahụike na ahụike anụ ahụ na nchekwa nke nwatakịrị, nke gbochiri iji ike ime mmụọ ọ bụla ma ọ bụ nke anụ ahụ. Na mgbakwunye, kemgbe afọ 2009, njide gụnyere ọrụ nke nne na nna iji kwalite mmepe nke njikọ dị n'etiti nwa na nne na nna ọzọ. Ka emechara, onye omebe iwu na-atụle ya na ọdịmma kachasị mma nke nwatakịrị ka ya na nne na nna ya nwee mmekọrịta.
Na agbanyeghị, ọnọdụ dị iche iche na-aga n'ihu na ikike nke ndị nne na nna nke, ma yabụ ịkpọtụrụ otu onye nne na nna mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ agaghị ekwe omume ma ọ bụ chọọ. Ọ bụ ya mere Nkọwa 1: 251a nke Dutch Civil Code nwere, n'ụzọ dị iche n'ụkpụrụ ahụ, enwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka ekenye nne na nna ijikọ nne na nna otu mgbe ịgba alụkwaghịm. N'ihi na nke a bụ ọnọdụ pụrụ iche, ụlọ ikpe ga-enye ikike ndị nne na nna maka ihe abụọ:
ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ịnabata ihe nwatakịrị ga-adaba ma ọ bụ furu efu n’etiti ndị nne na nna na atụghị anya na ọ ga-enweta ọganihu zuru oke na ọdịnihu ga-aga n'ihu, ma ọ bụ
ọ bụrụ na mgbanwe nke njide dị mkpa, ọ kachasị mkpa maka ọdịmma ụmụaka.
Emebela ụkpụrụ nke izizi ka etinyere ma ọ bụrụ na enwere iwu na nyocha nke ma achọrọ nzute a, dị oke egwu. Dị ka ihe atụ, enweghị ezigbo nkwurịta okwu n’etiti ndị nne na nna na obere ịgbaghara ịgbaso ndokwa nke ndị nne na nna apụtaghị na ọ bụrụ maka ọdịmma kacha mma nke nwatakịrị, a ga-ekenye ikike nne na nna n’aka otu nne na nna.  Ọ bụ ezie na arịrịọ maka iwepụ njigide ejikọtara ọnụ na inye onye nne na nna ikike ịkpọrọ naanị onye nne na nna n'ọnọdụ ọ bụla nke ụdị nkwukọrịta na-anọghị kpamkpam , o yikarịrị ka e nwere ajọ mmebi ụlọ, ịchụ nta, iyi egwu  ma ọ bụ nke enyere nne na nna na-elekọta nne na nna ha iwe na nhazi mgbe niile . N'ihe banyere ụkpụrụ nke abụọ, a ga-enwerịrị ike ịtụgharị uche site n'eziokwu zuru oke na ikike isi nne na nna isi dị mkpa maka ọdịmma kacha mma nke nwatakịrị. Ihe atụ nke njirisi a bụ ọnọdụ ebe a ga-eme mkpebi dị mkpa gbasara nwatakịrị na ndị nne na nna enweghị ike ịjụ maka nwa ahụ n'ọdịnihu dị nso ma kwe ka mkpebi mee nke ọma na ngwa ngwa, nke bụ imegide ọdịmma nwata.  Na mkpokọta, onye ọka ikpe anaghị achọ ịgbanwe ikike ịkpọkọ nwa ya ịbụ onye isi na-elekọta mmadụ, n'ezie na nke mbụ mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ gasịrị.
You chọrọ inwe nne na nna na ụmụ gị naanị mgbe gị gbasịrị alụkwaghịm? N'okwu ahụ, ị ​​ga-ebido nyocha site na itinye akwụkwọ ikike iji nweta ikike nne na nna n'ụlọ ikpe. Arịrịọ ahụ ga-enwerịrị ihe kpatara na ịchọrọ naanị ijide nwatakịrị ahụ. Achọrọ onye ọka iwu maka usoro a. Ọka ikpe gị na-akwado arịrịọ ahụ, na-ekpebi akwụkwọ ndị ọzọ ọ ga-edebanye ma nyefee ụlọ ikpe ahụ arịrịọ. Ọ bụrụ na etinyere arịrịọ maka ịkpọrọ naanị nne na nna, a ga-enye nne na nna ma ọ bụ ndị ọzọ nwere mmasị ohere ịza arịrịọ a. Ozugbo n'ụlọ ikpe, usoro gbasara inye ikike ndị nne na nna nwere ike iwe ogologo oge: opekata mpe ọnwa 3 ruo ihe karịrị afọ 1, dabere na ịdị mgbagwoju anya nke ikpe.
N'okwu dị oke esemokwu, onye ọka ikpe ga-ajụkarị Carelọ Ọrụ na-ahụ Maka Nlekọta Protectionmụaka ka o duzie nyocha ma nye ndụmọdụ ndụmọdụ (art. 810 paragraf 1 DCCP). Ọ bụrụ na otu kansụl ga-amalite nyocha na arịrịọ onye ọka ikpe rịọrọ ya, nke a ga-esite na ya pụta na-egbu oge n'usoro ikpe. Ebumnuche nke nyocha dị otú a site na Carelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchebe na Nchebe ụmụaka bụ iji kwado ndị nne na nna idozi esemokwu ha gbasara mkpokọta na ọdịmma kachasị mma nke nwatakịrị ahụ. Naanị ma ọ bụrụ na nke a anaghị ebute nsonaazụ n'ime izu anọ ka kansụl ga-aga n'ihu ịchịkọta ozi dị mkpa ma nye ndụmọdụ. Nke a mechara, ụlọ ikpe nwere ike inye ma ọ bụ jụ arịrịọ maka ikike ndị nne na nna. Onye ọka ikpe na-enyekarị arịrịọ ahụ ma ọ bụrụ na ọ chọpụta na e mezuru ọnọdụ ndị a na-arịọ, ọ nweghị ihe mgbochi megide arịrịọ maka njide na njide ahụ bụ maka ọdịmma kachasị mma nke nwatakịrị ahụ. N'okwu ndị ọzọ, ọkàikpe ga-ajụ arịrịọ ahụ.
At Law & More anyị ghọtara na ịgba alụkwaghịm bụ oge ihe isi ike nke gị. N'otu oge ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iche banyere ikike nne na nna nwere n'ebe ụmụ gị nọ. Understandingghọta ọnọdụ ahụ na nhọrọ dị mkpa. Law & More pụrụ inyere gị aka ikpebi ọnọdụ gị dị ka iwu kwadoro, ma ọ bụrụ na achọrọ, wepu akwụkwọ maka inweta ikike ndị nne na nna na-azụ ụmụ. You matara onwe gị n’otu n’ime ọnọdụ ndị a kọwara n’elu, ịchọrọ ịbụ naanị nne na nna iji lekọta nwa gị ma ọ bụ nwee ajụjụ ndị ọzọ? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu nke Law & More.
 HR 10 Septemba 1999, ECLI: NL: HR: 1999: ZC2963; HR 19 Eprel 2002, ECLI: NL: PHR: 2002: AD9143.
Previous Post Usoro Ntụle na-emebi emebi
Next Post Na-achọpụta uru ụlọ ọrụ ahụ dị: kedu ka ị si eme nke ahụ?